HomeWararka CiyaarahaJurgen Klopp oo dhankiisa Taariikh dhigay Kulanka Liverpool ay Xasuuqday Manchester United
Jurgen Klopp ayaa noqday tababarihii ugu dhaqsiyaha badnaa ee Liverpool ee gaara 200 oo guul isagoo maamulayay kooxda markii ay 5-0 ku xasuuqday Manchester United.
Tababaraha reer Jarmal ayaa si qurux badan u gaaray taarikhda, isagoo gaaray guushii ugu weyneyd ee Liverpool abid Man United kaga soo gaarto Old Trafford waxaana goolasha u kala dhaliyay Naby Keita , Diogo Jota iyo Mohamed Salah .
Klopp waa tababarihii afaraad ee taariikhda Liverpool ee gaara 200 boqol oo guulood isagoo raacay wadadii Tom Watson , Bill Shankly iyo Bob Paisley .
Si kastaba ha ahaatee, 54 jirkaan ayaa gaaray 200 guulood 331 kulan oo kaliya-waana in ka yar tababarayaasha kale ee Liverpool ee gaaray guushaas.
Klopp ayaa sidoo kale ah tababarihii ugu horeeyay ee taariikhda Liverpool ee 7 kulan oo xiriir ah oo horyaalka ah guuldaro la, aan ah kulankii Man United.
Sir Kenny Dalglish ayaa ah tababaraha kaliya ee ka roonaan kara guulaha Klopp ee boqolkiiba 60.42%, inkasta oo uu weli yahay 207 guul oo ka hooseeya rikoorka kooxda Shankly ee Reds.